What To Do If Your Baby Is Crying ? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
What To Do If Your Baby Is Crying ?
ကလေးဘဲ ငိုမှာပေါ့ဆိုပွီး အလှယျတှေးလို့လညျးရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ငိုမှာပေါ့ရဲ့နောကျကှယျက အကွောငျးအရာလေးတှသေိထားရငျတော့ကလေးထိနျးရတာလညျးလှယျကူလာမှာဖွဈသလို ကလေးငိုခွငျးကွောငျ့ဖွဈလာတဲ့စိတျပူပငျမှုတှအေတှကျအဖွထှေကျာစမှောပါ။
ဖဖေမေမေတေို့အနနေဲ့ ကလေးငိုပွီဆိုရငျ စဉျးစားရမှာတှကေတော့
ကလေး ဗိုကျဆာခွငျး( နို့ဆာခွငျး)
ကလေးဖြားနခွေငျး တို့ကွောငျ့ အဓိကဖွဈပါတယျ။
ကလေးဗိုကျဆာလို့ ငိုခွငျးဆိုပါက နို့တိုကျခြိနျ၊ အစာကြှေးခြိနျ ကွာလှနျးသှားခွငျး၊ ပမာဏနညျးသှားခွငျးတို့တှငျ ငိုတတျပါတယျ။
ကလေး ဆီး၊ဝမျးသှားထားပွီးရငျလညျး ကလေးဟာ စိုစိုစှတျစှတျနဲ့ မအီမသာဖွဈနတေတျပါတယျ။
မိဘတှအေနနေဲ့တော့ ဆီးသှားပွီးငိုတာကွောငျ့ ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျခွငျးဟုလညျးမှားယှငျးစှာထငျတတျကွပါတယျ။
အမှနျတော့ ပုံမှနျ အနှီး၊ သေးခံ တို့မှာ စိုခွငျးဟာလညျး ကလေးမအီမသာဖွဈစပေါတယျ။
ကလေးသှားပေါကျခွငျးနဲ့ပတျသကျလို့ကတော့ အသကျ၆လမှ ၁၂လ ( ၁နှဈကွား) ငယျသှားပေါကျတတျပါတယျ။
သှားပေါကျမယျ့နရောသှားဖုံးလေးတှကေို တိုးထှကျရတာမို့ ကလေးငယျဟာ ဒီလိုအခြိနျမြိုးမှာ ပိုငိုတာ၊ ဖြားတာတှရှေိတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကလေး ငိုတာ၊ ဖြားတာ၊ အစားနဲတာတှရှေိလာရငျ ပါးစပျလေးဟခိုငျးကွညျ့ဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
ကလေးလထေိုးလအေောငျ့ခွငျးမှာတော့ ကလေးမှေးပွီးစ ၁ပတျမှစ၍ ကလေး ၃လ လောကျထိ လထေိုးလအေောငျ့ခွငျးကွောငျ့ ကလေးငိုတတျပါတယျ။
အခြိနျအားဖွငျ့ နလေ့ညျပိုငျးနဲ့ ညနစေောငျးပိုငျးတှမှော အဓိက ငိုတတျပါတယျ။
ဂရုစိုကျမှုလိုခငျြလို့ ငိုခွငျးမှာတော့ ကလေးငယျဟာ အနားမှာ မိဘ/လူမရှိတာနဲ့ငိုတတျပါတယျ။ မိဘအနားရောကျလာခြိနျ၊ ခြော့မွူခြိနျ၊ ထှေးပှလေို့ကျခြိနျတို့မှာအငိုတိတျသှားတတျပါတယျ။
ကလေးဖြားခွငျးကွောငျ့ ငိုခွငျးမှာတော့ ကလေးငိုခြိနျမှာ ကိုယျအပူခြိနျတကျနတေတျပါတယျ။ နှာပိတျခွငျး၊ ခြောငျးဆိုးခွငျး၊ ဝမျးပကျြခွငျးတို့ဖွဈခြိနျတှငျ
ဘယျလိုကွောငျ့ပဲငိုငို ဒီအခကျြတှကေို အရငျစဉျးစားကွညျ့ပါ။ ဖွရှေငျးကွညျ့ပါ။
ကလေးကို အနှီးလေးနဲ့ မတငျးလှနျး၊ မလြှော့လှနျးပဲထှေးပှထေ့ားလိုကျပါ။
နို့တိုကျခွငျး၊ ခြိုလိမျပေးစို့စခွေငျးတို့နဲ့လညျး အငိုတိတျအောငျ လုပျဆောငျ နိုငျပါသေးသညျ။
ကလေးဘဲ ငိုမှာပေါ့ဆိုပြီး အလွယ်တွေးလို့လည်းရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ငိုမှာပေါ့ရဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာလေးတွေသိထားရင်တော့ကလေးထိန်းရတာလည်းလွယ်ကူလာမှာဖြစ်သလို ကလေးငိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပူပင်မှုတွေအတွက်အဖြေထွက်ာစေမှာပါ။
ဖေဖေမေမေတို့အနေနဲ့ ကလေးငိုပြီဆိုရင် စဉ်းစားရမှာတွေကတော့
ကလေး ဗိုက်ဆာခြင်း( နို့ဆာခြင်း)
ကလေးဖျားနေခြင်း တို့ကြောင့် အဓိကဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးဗိုက်ဆာလို့ ငိုခြင်းဆိုပါက နို့တိုက်ချိန်၊ အစာကျွေးချိန် ကြာလွန်းသွားခြင်း၊ ပမာဏနည်းသွားခြင်းတို့တွင် ငိုတတ်ပါတယ်။
ကလေး ဆီး၊ဝမ်းသွားထားပြီးရင်လည်း ကလေးဟာ စိုစိုစွတ်စွတ်နဲ့ မအီမသာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
မိဘတွေအနေနဲ့တော့ ဆီးသွားပြီးငိုတာကြောင့် ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းဟုလည်းမှားယွင်းစွာထင်တတ်ကြပါတယ်။
အမှန်တော့ ပုံမှန် အနှီး၊ သေးခံ တို့မှာ စိုခြင်းဟာလည်း ကလေးမအီမသာဖြစ်စေပါတယ်။
ကလေးသွားပေါက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ အသက်၆လမှ ၁၂လ ( ၁နှစ်ကြား) ငယ်သွားပေါက်တတ်ပါတယ်။
သွားပေါက်မယ့်နေရာသွားဖုံးလေးတွေကို တိုးထွက်ရတာမို့ ကလေးငယ်ဟာ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ပိုငိုတာ၊ ဖျားတာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေး ငိုတာ၊ ဖျားတာ၊ အစားနဲတာတွေရှိလာရင် ပါးစပ်လေးဟခိုင်းကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
ကလေးလေထိုးလေအောင့်ခြင်းမှာတော့ ကလေးမွေးပြီးစ ၁ပတ်မှစ၍ ကလေး ၃လ လောက်ထိ လေထိုးလေအောင့်ခြင်းကြောင့် ကလေးငိုတတ်ပါတယ်။
အချိန်အားဖြင့် နေ့လည်ပိုင်းနဲ့ ညနေစောင်းပိုင်းတွေမှာ အဓိက ငိုတတ်ပါတယ်။
ဂရုစိုက်မှုလိုချင်လို့ ငိုခြင်းမှာတော့ ကလေးငယ်ဟာ အနားမှာ မိဘ/လူမရှိတာနဲ့ငိုတတ်ပါတယ်။ မိဘအနားရောက်လာချိန်၊ ချော့မြူချိန်၊ ထွေးပွေ့လိုက်ချိန်တို့မှာအငိုတိတ်သွားတတ်ပါတယ်။
ကလေးဖျားခြင်းကြောင့် ငိုခြင်းမှာတော့ ကလေးငိုချိန်မှာ ကိုယ်အပူချိန်တက်နေတတ်ပါတယ်။ နှာပိတ်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်းတို့ဖြစ်ချိန်တွင်
ဘယ်လိုကြောင့်ပဲငိုငို ဒီအချက်တွေကို အရင်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဖြေရှင်းကြည့်ပါ။
ကလေးကို အနှီးလေးနဲ့ မတင်းလွန်း၊ မလျှော့လွန်းပဲထွေးပွေ့ထားလိုက်ပါ။
နို့တိုက်ခြင်း၊ ချိုလိမ်ပေးစို့စေခြင်းတို့နဲ့လည်း အငိုတိတ်အောင် လုပ်ဆောင် နိုင်ပါသေးသည်။